Semalt विशेषज्ञ स्नोशो स्प्यामको चेतावनी दिन्छ: यो के हो र यसलाई कसरी बेवास्ता गर्ने
स्नोशो स्प्यामर्सले धेरै आईपी ठेगानाहरूमा बिभिन्न सन्देशहरू फैलायो, र स्प्यामको प्राथमिक रूप एकल आईपी ठेगानाबाट पठाइएको अनावश्यक ईमेलहरूको उच्च मात्रा हो। यदि तपाईं स्नोशो स्प्याम फिल्टर द्वारा ब्लक हुनुभयो भने, सम्भावनाहरू यो हो कि तपाईंले आवश्यक उपायहरू गर्नुभएन।
ओलिभर किंग, Semalt को एक अग्रणी विशेषज्ञ, यहाँ स्नोशो स्प्याम को एक सिंहावलोकन र यो कसरी टाढा बस्न को लागी सल्लाह प्रदान गर्दछ।
हिउँको इतिहास र पृष्ठभूमि:
चार महिना अघि, एक मेलबक्स प्रदायकको पोस्टमास्टर डेस्कमा, मँ स्नोशो स्प्यामको मूल्या with्कनको लागि शुल्क लगाइयो। त्यस समयमा मैले केहि स्वचालित फिल्टरहरू सिर्जना गरें र मेरो ईमेल आईडीमा समायोजन गरे। मैले २xx7 लाई कार्य गरें र डोमेन र आईपीमा लाइभ डाटामार्फत खोप्न यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि प्रणालीले हालको खतराहरू प्रशोधन गर्न सक्छ।
एक स्प्यामर आयो र केहि फरक प्रयास गर्‍यो। २०० In मा, उही स्प्यामरले स्नोशो स्प्यामको विकास गर्‍यो। आईपी वा डोमेन ब्लक गरेको केही सेकेन्डमा, अधिक र अधिक खराब गतिविधिहरू अवलोकन गरियो।
जस्तो स्नोशो हिउँको व्यापक क्षेत्रमा यात्रुहरूको भार फैलन्छ, स्नोशो स्प्याम एक प्रविधि हो जुन ह्याकरहरूले धेरै डोमेन र आईपीहरूमा स्पाम फैलाउन प्रयोग गर्दछ। तिनीहरू प्रतिष्ठा मेट्रिक्सलाई पातलो पार्न र फिल्टरहरू (स्प्याम्हास) लाई हटाउन चाहन्छन्।
किन हिमपात एक मुद्दा हो?
परम्परागत स्प्याम फिल्टरहरूले स्नोशो स्प्यामलाई लड्न सक्दैन किनभने उनीहरूसँग एकल डोमेन वा आईपीबाट अनुरोधहरू ह्यान्डल गर्न पर्याप्त ठाउँ छैन। हिमशोता स्प्याम भोल्यूम-आधारित फिल्टरहरूको रडार अन्तर्गत रहन्छ, तर समस्या समाधान गर्ने कुनै तरिका छैन।
कुरा जटिल बनाउन, गलत सकारात्मक बिना स्नोशो ब्लक गर्न सम्भव नहुन सक्छ। संभावना छ कि स्नोशो स्प्यामरले /० आईपीहरू २ / / २ / मा गर्दछ, ताकि तपाईं सम्पूर्ण डोमेन वा आईपी रोक्न सक्नुहुन्न। यसका साथै, सामग्री मान्य देखिन्थ्यो, र म खराब सामानहरू र राम्रो चीजहरू छुट्याउन सक्दैन। दुर्भाग्यवश, स्प्यामरहरू र ह्याकरहरू जहिले पनि एक कदम अगाडि हुन्छन्। यस्तो लाग्दछ कि हामीले समाधानहरू नभएसम्म केहि बर्ष सम्म स्नोशो स्प्यामसँग लड्न पर्छ। २०० In मा, एन्टी स्प्याम उद्योगले यस स्पामलाई प्रतिक्रिया दियो। उही वर्ष, स्प्यामहोस अगाडि आयो र यसको CSS (समग्र हिउँ-जुत्ता) सूची सुरू गर्‍यो। अत्यावश्यक स्प्याम फिल्टरहरू अद्यावधिक गरिएको थियो, र विज्ञहरूले स्नोशो स्प्याम रोक्नका लागि उपायहरू खोजे। स्नोशो स्प्याम उत्तेजक छ। तर प्राय जसो केसहरूमा यसले संयुक्त राज्यमा क्यान-स्प्याम ऐनको उल्लंघन गर्दैन। स्प्यामरले जहिले पनि पोष्ट बक्स समावेश गर्दछ हुलाक ठेगाना आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विभिन्न स्थिर आईपीहरू र डोमेनहरू प्रयोग गर्न।
कसरी स्नोशो स्प्यामबाट बच्ने?
ईमेल मार्केटरको रूपमा, स्नोशो स्प्यामसँग लड्न यो आवश्यक छ। केही सजिलो तरिकाहरू तल उल्लेख गरिएका छन्।
१. तपाईले बहु डोमेनको सट्टा सबडोमेन प्रयोग गर्नु पर्छ।
२. तपाईंले फिल्टरिंग र दर-सीमित चुनौतिहरू पार गर्न डोमेन र आईपी थप्नुहुन्न। यो एकदम सरल छ, तर यदि तपाइँ फिल्टर वा अवरुद्ध भइरहेको छैन भने, सम्भावना यो छ कि सबै ठीक छ। यदि तपाईं स्प्यामहस सीएसएसमा आफैलाई फेला पार्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले थोरै डोमेन र आईपीहरू पठाउने विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईंको दिमागमा शंका छ भने, तपाईं आईएस विशेषज्ञसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ स्नोशो स्प्यामको बारेमा।